PASSWORD LOAD: Martin Vrijland
YAA KU DHACAY
XADGUDUB & DHAGASHADA
PASSWORD wuu jecelyahay
KU SAABSAN ME
Ku qor cinwaankaaga ama cinwaanka e-mailkaaga.
Waxaad ku heli doontaa link adigoo isticmaalaya e-mail si aad u abuurto erey cusub.
KOOXDA BATTLE IYO HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO
buug dheeraad ah
taageero dheeraad ah
MUUQAALADA JULY 2017 - FEB 2020
> Isugeyn booqashooyin: 16.768.413
Booqashooyinkiiba 18 FEB 2020
Guud ahaan Wadarta: 1.380.579
Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Habka ugu waxtarka badan ee lagula dagaallamo coronavirus-ka wuxuu ka yimaadaa Shiinaha (fiidiyow)
Dhibaatada Corona: goorma ayaa tan la soo dhaafay oo maxaan hadda samaynaa?
'Fashilka cabal' waa wax aan micno lahayn oo waa kuma 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
AnOpen op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
Future op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
Rose op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Ku qor cinwaankaaga e-mail si aad u diiwaan geliso isla markaana u hesho email si dhakhso leh maqaal cusub. Waxaad sidoo kale riixi kartaa gambaleelka cagaarka si aad u hesho farriin fariin ah oo ku saabsan taleefanka, i-pad ama kombiyuutar.
BAARITAANKA SHARCIYEEDKA AVG
Akhri buug-tilmaameedka aasaasiga ah
© 2020 Martin Vrijland. All rights reserved Theme by Solostream.
Bogaggaan ayaa xirmi doona:
Buuggaaga ma dhammaysay oo ma jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah?
Markaad sii wadato isticmaalka goobta, waxaad ogolaatay isticmaalka cookies. macluumaad dheeraad ah
Qalabka cookie ee ku yaal boggaan waxaa loogu talagalay in 'loo ogolaado' cookies 'inay ku siiyaan khibrada ugu fiican ee booqashadaada. Haddii aad sii wado isticmaalka boggan adigoon bedelin goobaha cookie-ga ama aad gujiso "Accept" goobahan.